Wararka - Noocyada iyo shaqooyinka saliidda lagama maarmaanka ah
Noocyada iyo shaqooyinka saliida lagama maarmaanka ah
Saliida Muhiimka ahi waa dareere udgoon laga soo saaray ubaxyada, caleemaha, jirridaha, xididdada ama midhaha dhirta dabiiciga ah. Dadku waxay adeegsadaan farsamooyin gaar ah, sida duugista meeriska dhibcaha ama neefsashada qoto dheer, si ay saliid muhiim ah ugu soo saaraan jirka bini'aadamka, kaasoo loo yaqaan "aromatherapy".
Saddex nooc oo saliid muhiim ah:
1. Saliid hal lagama maarmaan ah
Waa hal geed oo laga soo saaray dhirta carafteeda carafkeeda waana saliid saafi ah oo lama huraan ah oo aan la wareejin. Saliida hal lagama maarmaanka ah ayaa kaligeed la isticmaali karaa ama la qasi karaa. Qalabka ceyriinka ah ee saliida lama huraanka ah waa inay ahaadaan dhir daaweyn ah, oo badanaa loogu magac daray dhirta, sida lavender oil lagama maarmaanka ah, kor u kacay saliida lagama maarmaanka ah, reexaanta saliida lagama maarmaanka ah, iwm. qaddarka, guud ahaan laguma talinayo in si toos ah loogu mariyo saliidaha kale ee muhiimka ah maqaarka si looga fogaado inay uga sii darto culeyska nuugista maqaarka oo ay ku keento xasaasiyad maqaarka ah.
2. Isku dar saliid muhiim ah
Waxay loola jeedaa dareeraha udgoon ee si toos ah loogu isticmaali karo adoo isku qasaya laba ama in ka badan oo nooc oo saliidaha lagama maarmaanka ah ah. Inta badan iskuxirka saliidaha lagama maarmaanka ah waxaa lagu qasi karaa isku dheelitirnaan dhexdhexaad ah waxaana si fiican u nuugi kara jirka bini'aadamka iyadoon wax saameyn ah yeelan. Isku darka saliida lagama maarmaanka ah waxaa si toos ah loogu marin karaa wajiga, gacmaha, lugaha iyo qeybaha kale, taas oo si weyn u wanaajin karta maqaarka maqaarka ama guba dufanka badan ee jirka ku jira.
3. Saldhig saliid
Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa saliid dhexdhexaad ah, waa nooc ka mid ah saliidda cuntada loo isticmaalo in lagu milo saliidda muhiimka ah. Saliida salku waa nooc ka mid ah saliida aan isbeddelayn ee laga soo saaro miraha dhirta iyo miraha. Saliida khudradda lafteeda lafteeda waxay leedahay saameyn daaweyn gaar ah. Markaad milayso oo aad isku qasayso hal saliid oo lama huraan ah, waxay hagaajin kartaa waxtarka guud ee saliida muhiimka ah, gaar ahaan waxay si dhakhso leh jidhka uga dhigi kartaa mid kuleyl keena oo diida qaadashada borotiinka xad-dhaafka ah. Saliidaha saldhiga u ah saliida canabka, saliida yicibta macaan, saliida saytuunka, saliida jeermiska qamadiga, saliida geedaha fiidka, iwm.
Saddex dhadhan oo saliid muhiim ah ：
1. Udgoon saliid lagama maarmaan ah
Intooda badani way dhexgalaan oo waxay dadka ka dhigi karaan kuwo faraxsan ama firfircoon. Laakiin isbeddelku sidoo kale waa kan ugu sarreeya, sidaa darteed ilaalintiisu aad ayey u yar tahay, nolosha adeeggu aad bay u gaaban tahay, ma dheereyn karto muddo dheer.
2. Saliid muhiim ah oo dhexdhexaad ah
Guud ahaan, waxay leedahay shaqada dejinta, isu dheelitirka iyo xasilinta jirka iyo maskaxda, waxayna leedahay saameyn wax ku ool ah oo ku saabsan jirka daalan iyo isbeddelada shucuurta. Nuxurka saliida lama huraanka ahi waxay udhaxaysaa caraf udgoon iyo saliid muhiim ah oo hooseysa. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa isku darka saliidaha lagama maarmaanka ah.
3. Caraf udgoon saliid muhiim ah
Waxay ka tirsan tahay nooca "socodka dheer". Bilowga, udugga waa iftiin lagamana yaabo in xitaa la dareemo. Laakiin dhab ahaantii, carafka udgoon ee udgoon hooseeya ee saliidda lagama maarmaanka ahi waa mid aad u waara, qaarna waxay socon karaan toddobaad, taas oo macnaheedu yahay in 1 toddobaad ay urin karaan caraf daciif ah oo saliid muhiim ah.
Sidee loo nuugo saliida lagama maarmaanka ah:
1. Neefsashada neefsashada
Nidaamka neefsashada wuxuu si dhakhso leh u nuugaa saliida lagama maarmaanka ah. Markaad uriso saliida lagama maarmaanka ah, maaddooyinkeeda udgoon waxay kor u qaadi kartaa sii deynta tamarta la xiriirta ee nidaamka neerfaha aadanaha, ka dibna waxay soo saartaa saameynta dejinta, dejinta, kicinta ama xiisaha leh.
2. Nuugista maqaarka
Xawaaraha maqaarku ku nuugo saliida lama huraanka ah ayaa ah tan labaad oo kaliya habka neefsashada. Molekuyuullada saliidda ee muhiimka ahi aad ayey u yar yihiin. Waxay si toos ah uga dhex gudbi karaan daloolada maqaarka waxayna geli karaan microvessels-ka ku jira epidermis-ka jirka bini'aadamka, si kor loogu qaado wareegga dhiigga iyo wareegga dhiigga ee jirka, loo caawiyo soo saarista sunta jirka, iyo hagaajinta ama kicinta dareenka nidaamka.
3. Nuugista nidaamka dheefshiidka
Illaa aad faham dhammaystiran ka leedahay sifooyinka saliidda dhirta lagama maarmaanka u ah, si fudud ha isugu dayin saliidda lagama maarmaanka ah ee afka laga qaato. Sidan oo kale, waxaa fiican in la isku dayo wax ka yar, si aan loo keenin "sumowga saliidda lagama maarmaanka ah" iyo falcelinta kale ee xun.
Saamaynta qurxinta ee saliidaha lagama maarmaanka ah ee udgoon
1. Saamaynta quruxda
Qaab dhismeedka kelli ee saliida lagama maarmaanka ah waa mid yar, dabiici ah oo saafi ah. Way fududahay in la dhex galo maqaarka, lagu milmo dufanka oo la galo jidhka bini'aadamka, si kor loogu qaado caajisnimada iyo qalajinta maqaarka isha laga helayo loona gaadho ujeedka ah in maqaarka loo qoyo.
Intaa waxaa dheer, saliida lagama maarmaanka ah waxay dhiirrigelin kartaa wareegga dhiigga ee nidaamka dhiigga iyo nidaamka lymfatiga, nadiifinta iyo soo saarista qashinka jirka ku jira waqtigiisa, si markaa loo gaaro isu dheelitirka guud ee jirka, wadnaha iyo ruuxa, dadkuna uga dhigaan kuwo cusub oo soo jiidashada dabiiciga ah ee gudaha ka baxsan.
2. Saamaynta ay ku yeelatay Jirka
Saliida lagama maarmaanka ah ee dhirta waxaa loo yaqaan "hormoonka dhirta", sidaa darteed saliida badan ee lagama maarmaanka ah waxay la mid yihiin hormoonada dabiiciga waxayna door muhiim ah ka ciyaaraan caafimaadka jirka bini'aadamka. Marka loo eego daawo dhaqameedka Shiinaha, carafka saliida lama huraanka ah waa nooc ka mid ah tamarta Qi. Ka dib markuu la xiriiro jirka bini'aadamka, qiimahan Qi wuxuu caawiyaa inuu ilaaliyo dheelitirka Qi iyo dhiigga jidhka bini'aadamka, si jidhka bini'aadamku u helo dhiig ku filan oo uu ku nafaqeeyo afarta addin iyo lafihiisa, isagoo markaa nidaaminaya endocrine, iyo xoojinta nidaamka taranka shaqooyinka naasaha dumarka, makaanka iyo ugxansidaha.
3. Saamaynta ay ku leedahay cilmu-nafsiga
Markaad daasho, dooro saliid muhiim ah oo dhir ah oo aad jeceshahay. Udugga ayaa kaa caawin kara inaad ka kaxeyso daalka. Waa inaad ogaataa in saliida dhirta lagama maarmaanka ah ay leedahay ur udgoon. Ka dib markii uu soo galo maskaxda bini-aadamka iyada oo loo marayo urta, waxay kicin kartaa kiliyaha maskaxda si ay u soo saaraan hormoonnada, u hagaajiyaan dareemayaasha aadanaha, baabi'iyaan walwalka, yareynta walwalka, waxayna ka caawiyaan jirka iyo maskaxda inay ku nastaan ​​gobolka ugu raaxada badan.